किन सुन्निन्छ मिर्गौला ?
Saturday, December 15 २o७५ मङ्सिर २९ शनिबार
डा अनिल बराल
२o७५ असोज १७ बुधबार| प्रकाशित १५:३८:५९
अधिकांस मानिसको शरीरमा दुई वटा मिर्गौला हुन्छ । तर कसैकसैमा जन्मजात एउटा मात्र मिर्गौला पनि हुनसक्छ । एउटा मात्र मिर्गौला हुनेको संख्या निकै कम हुन्छ । मिर्गौला झट्ट हेर्दा सिमी आकारको हुन्छ । मिर्गौलाको मुख्य काम शरिरमा उत्पन्न भएका विकारहरुलाई बाहिर फ्याँक्ने हो ।
मिर्गौलाले पिसाबको माध्यमबाट विकारहरूलाई शरीरमा जम्मा हुन नदिई बाहिर फ्याँक्छ । त्यस बाहेक मिर्गौलाले शरीरमा पानी र लवणको मात्रा मिलाउन, क्याल्सियम र फस्फोरसको सन्तुलन कायम राखी हड्डीहरू बलिया बनाउन, मांसपेसी र नसाहरू चल्नका लागि शरीरमा सोडियम, पोटासियमको मात्रा मिलाउन, रगत बनाउने हार्मोन, रक्तचाप नियन्त्रण र मुटुकै कार्य नियन्त्रण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सामान्यतया शरीरका दुईवटा मिर्गौलाले संयुक्त रूपमा दिनभरमा लगभग १८० लिटरभन्दा बढी रगत फिल्टर गर्ने काम गर्छन् । त्यसमध्ये डेढदेखि दुई लिटर मात्रै पिसाबका रूपमा बाहिर फाल्ने काम हुन्छ र बाँकी १७८ लिटर रगत तथा पानीले शरीरमै फैलाउँछ । मिर्गौलाले गर्ने कामको यो दरमा कमी आउने वा त्यो अनुसार काम गर्न सकेन भने मिर्गौलामा समस्या देखिन थाल्छ ।
शरीरभित्र रहेको मिर्गौला ९ देखी ११ सेन्टिमिटर लामो, ५ देखी ७ सेन्टिमिटर चौडाई र करिब एक सय २५ देखि एक सय ७० ग्राम तौलको हुन्छ । मेरुदण्डको दाँया–बाँया करङमुनि मिलेर बसेका मिर्गौलाको यो आकारमा बृद्धि भयो भने मिर्गौला सुन्निएको भन्न सकिन्छ । मिर्गौला एउटै कारण तथा समस्याले मात्र सुन्निँदैन । मिर्गौलामा नै समस्या देखिएर वा शरिरका अन्य अंगमा समस्या हुँदा मिर्गौला सुन्निने समस्या हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा करिब ७० प्रतिशत मानिसहरुको मिर्गौला पिसाब नलीमा हुने अवरोधका कारण सुन्निएको देखिन्छ । पत्थरीका कारण पिसाब नली तथा पिसाब थैलीमा अवरोध आउँदा मिर्गौला सुन्निन्छ । मिर्गौला एउटा वा दुवै सुन्निने हुन्छ । पिसाब नली, पिसाब थैलीको समस्यासँगै पुरुषमा प्रोस्टेट सुन्निँदा पनि मिर्गौला सुन्निने समस्या हुन्छ । पिसाब नलीमा लाग्ने रोगहरू, पिसाब थैली र प्रोस्टेट ग्रन्थीमा हुने ट्युमर, पत्थरी वा अन्य कारणले पिसाब मार्गमा अवरोध हुँदा मिर्गौला सुन्निँदै जाने र त्यसको उपचार नगर्ने हो भने मिर्गौला फेल हुने सम्भावना रहन्छ ।
बच्चा जन्मँदा लिङ्गको टुप्पोको छाला पछाडि नफर्किँदा पनि पिसाब रोकिएर सुन्निने समस्या हुन्छ । यो समस्याको उपचार भएन भने बच्चाको सानै उमेरमा मिर्गौला फेल हुने खतरा हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो आमाले ख्याल नगरिदिँदा यस्तो समस्या भएका बच्चालाई पछि अस्पतालमा ल्याएको भेटिन्छ ।
यस्तै पिसाब नलीमा ‘क्याटेथर’ राख्दा चोट लाग्यो भने त्यहाँको नली साघुरिँदै गई ‘युरेथ्रा’बाट लामो समयसम्म पिसाब पूरै ननिस्कएपछि पनि मिर्गौला सुन्निने हुन्छ । महिलाहरूको पाठेघर तल खस्दै जाँदा पनि मिर्गौला सुन्निन्छ । यस्तै पाठेघरको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, अण्डबाहिनी नलीको क्यान्सरले पनि मिर्गौला सुन्निन्छ । पाठेघर खस्दा अगाडिको पिसाब थैली र नली भएको ठाउँमा चाप पर्न गई सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा मिर्गौला सुन्निने हुन्छ । यो समस्याको समयमा नै समाधान भएन भने मिर्गौला फेल नै हुनजान्छ ।
गर्भावस्थामा पनि मिर्गौला सुन्निन्छ । यो समयमा पाठेघरमा रहेको बच्चाका कारण मुत्रथैलीमा चाप पर्दा मिर्गौला सुन्निने गर्छ । यो अवस्थामा सुन्निएको मिर्गौलालाई सामान्य मान्न सकिन्छ।
पेटका अन्य अंगहरु तथा ग्रन्थीहरु बढेमा समेत मिर्गौला सुन्निने समस्या हुन्छ । यसका साथै मिर्गौलामा नै समस्या हुँदा पनि सुन्निे गर्छ । मिर्गौलामा पानीको फोका जम्ने समस्याले पनि मिर्गौला सुन्नाउने हुन्छ । शरिरमा अरु रोगहरु छ र त्यसका प्रोटिन तथा केमिकल गएर मिर्गौलामा जम्मा हुँदा पनि मिर्गौला सुन्निन्छ ।
मिर्गौला धेरै कारणले सुन्निने हुँदा यस्को उपचार पनि कारण अनुसार फरक फरक हुन्छ । सर्वप्रथम के कारणले मिर्गौला सुन्निएको हो भन्ने पत्ता लगाएर त्यस अनुसारको उपचार गर्न सकिन्छ । मिर्गौला सुन्निँदा सामान्यतया कोखा दुख्ने, पिसाबमा रगत देखिने भयो भने तुरुन्तै उपचारका लागि पुगिहाल्नुपर्छ । मिर्गौला सुन्निँदै जाँदा उपचार भएन भने मिर्गौला फेल नै हुने खतरा रहेका कारण प्रत्येक व्यक्तिले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । पिसाबमा प्रोटिन र रगतमा क्रियाटिनिनको जाँच र वर्षमा एकपटक भिडियो एक्सरे गराई समयमै मिर्गौला समस्याबाट जोगिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपचार हो ।
अदालतमा चितुवा पसेपछि...
जग्गा किर्ते आरोपमा पक्राउ परेका महन्त विरुद्ध थुनछेक बहस सुरु
गीतकार टेक तामाङको ‘नाता’ सार्वजनिक [भिडियाे]
सुनसरीमा भिडन्तमा मारिएकाको सनाखत
कैलालीका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गरेकाे छ : उद्योगमन्त्री यादव
‘हिरो कप’ को उपाधि पर्सा ११लाई
नक्कली नागरिकता बनाएर बेच्ने गिरोह पक्राउ
प्रधानमन्त्रीबाट अपमानित भएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरुद्वारा सचिवालय बैठक बहिस्कार
डा कुमुद, जो 'मृत मुटु' झिकेर नयाँ जीवन दिन्छन्
दरबारकै स्विकृतिमा मैले ओशोलाई नेपाल भित्र्याएको थिएँ
ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न एनआरएनलाई कृषि मन्त्रीको आग्रह
सरकारलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुला, यस्तो छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेश
निर्मलाको हत्या भएको बेला कहाँ थिए पक्राउ परेका रावल र चौधरी?
कर्मचारी समायोजन : संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गर्‍यो २५ प्रश्न
राष्ट्रपतिको हेलिप्याड र बुलेटप्रुफ गाडी
सिराहामा १२ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार